Kunda zhizha neaya mavara akasarudzika eako Apple Watch | Ndinobva mac
Kunda zhizha neaya mavara akasarudzika eako Apple Watch
Zhizha rasvika uye iine risingaperi nhamba yezvinoitika izvo zvinoita kuti iwe uikanganwe. Ino inguva iyo inopisa inokukoka iwe kuti uende kumahombekombe uye madziva ekushambira kana kungova pamatanda ane aperitif.
Kana iri iri zano rako remavhiki mashoma anotevera uye uri musikana wemazuvano, pamwe aya mabhande atinozopa kune ako Apple Watch ita kuti iende kune yekupedzisira.
Iyo izere muunganidzwa wemabhande akagadzirwa eganda uye yakashongedzwa nemuzhizha kwazvo maruva anodhinda. Ivo anowanikwa mune ese ari maviri masize kesi, kune ese ari 38mm uye 42mm uye nemavara asingaperi. Izvi ndizvo zvakasiyana izvo muchinyorwa chino isu hatina kumboshinga kuisa pane mashanu emakumi maviri mamodheru akasiyana aunogona kutenga mu chinotevera chinongedzo.
Zvinoshamisa kwazvo kuti nehuwandu hwemapatani aripo iwe hauwani iyo inonyatsokutsanangudza. Kunyangwe iwe uchida imwe yako kana uchida kuzvipa, ibhanhire iro rinowedzera kubata kweutsva kuApple Watch.
Mutengo waro wakadzikiswa uye unongova ma7,71 euros Saka pasina kupokana, pamutengo wekutenga nayo imwechete yepakutanga Apple yezvakachipa iwe unogona kutenga masere eaya. Kana iwe uchida kufadza ino zhizha neApple Watch yako yakashongedzwa nemavara anodakadza, usazeze kushanyira webhu kuti udzidze zvakawanda nezve aya mabhande atinokuratidza nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kunda zhizha neaya mavara akasarudzika eako Apple Watch
Chris Lattner, musiki weiyo Swift mutauro, yekupedzisira chete 6 mwedzi kuTesla
Ive nekuchenjerera kana uchitenga 27-inch iMac, izvo zvitsva zvine 80% inokurumidza mifananidzo